१० वर्षको केटाबाट गर्भवती भइन् १३ वर्षीया बालिका : चिकित्सक र परिवार हैरान ! | Nagarik Khabar - नेपाली जनताको खबर​
access_time२०७६ साल माघ १० गते, शुक्रबार ०४:०१ PM chat_bubble_outline Comments folder_open संसार रोचक​
एजेन्सी । गर्भवती भएकी १३ वर्षीया बालिकाले आफ्नो पेटमा हुर्किरहेको बच्चाको बाबु एक १० वर्षीय बालक रहेको बताएपछि चिकित्सक र आफन्त हैरान भएका छन् । बालिकाले आफ्नो प्रेमी १० वर्षका बालक रहेको बताएकी छन् । एकवर्षदेखि दुईबीच शारीरिक सम्बन्ध कायम हुँदै आएको थियो ।
रसियाका डरिया र इवान नामको बालबालिकाको यो जोडीका बारेमा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकताका साथ समाचार सार्वजनिक गरेका छन् । यो जोडीको सच्चाइको कथालाई स्थानीय टेलिभिजनले प्रशारण गरेको छ ।
चिकित्सकले यो जोडीका बारेमा आश्चर्यजनक घटना भनेका छन् । डा. इवगिनी ग्रेकोवले बालिका भन्दा पनि सानो बालक बच्चाको पिता हुन नसक्ने बताएकी छन् । तर एक साइकोलोजिष्टले भने बालबालिकासँग कुराकानी गरेपछि घटनामा पूर्णतया सत्यता रहेको बताएकी छन् ।
अभिभावकको अनुमतिमा दुवैजनाले टेलिभिजन शोमा सहभागिता जनाएका छन् । अभिभावकले बालबालिकाको स्वास्थ्य जाँचको अनुमति पनि दिएका छन् । यो जोडीलाई लिएर रसियामा निक्कै बहस चलिरहेको छ ।
आठ हप्ताकी गर्भवती डरियाले पेटमा भएको बच्चा राख्न चाहेकी छन् । उनले आफ्नो प्रेमीसँग जीवनभर बस्ने बाचालाई कहिल्यै नभुल्ने बताएकी छन् । इवानकी आमाले आफ्नो छोरा १० वर्षमै बाबु बन्न लागेको देखेर आफु आश्चर्यमा परेको बताएकी छन् ।
डरियाले आफ्नो जीवनसाथी इवानले आफ्नो ध्यान दिएको भन्दै सन्तुष्टि पनि जनाएकी छन् । यो जोडीका बारेमा धेरै सकरात्मक समाचार आए पनि स्थानीयले आक्रोस पनि व्यक्त गरेका छन् ।
लिभरपुलको जित, तीन एक गोल अन्तरले आर्सनल पराजित
आईपीएल क्रिकेटः सुपर ओभरमा बैंगलोरको दोस्रो जित